I-Hammarsjöleden | Vakashela uHultsfred
umphetho » 🥾 Bona futhi wenze » 👟 Imisebenzi » U-Andra Ukuhamba » Okhanyile
Umzila uqala engadini yeKalvkätte, okuyisikhungo esihle kakhulu ekuphumeni komgwaqo omkhulu u-23 usiya eHultsfred isikhungo. Paka imoto yakho epaki enkulu yezimoto, bese ungena uqonde engadini enhle ngaphambi kokuqala ukunyuka. Kunokukhethwa okukhulu kokuphilayo, ingadi yemifino kanye nensimu yama-rose amancane.
Ube usuhamba ezindleleni nasemigwaqweni eyitshe eliwubhuqu kuze kufike endaweni yokuzilibazisa yase-Stora Hammarsjön.
Ingxenye yokugcina yomzila idlula endaweni yokulondoloza imvelo. Indawo enamagquma enehlathi elincane, elidala likaphayini. Umzila we-Hammarsjö uphelela e-Stora Hammarsjön lapho ungaqhubeka khona uhamba uzungeze i-Hammrsjön noma mhlawumbe ume ukuze uthole ikhofi bese ucwilisa e-Hammarsjön.
• Engadini yeKalvkätte kunendawo yokupaka kanti phakathi nezinyanga zasehlobo kukhona nethoyilethi namanzi.
• ELilla Hammarsjön kunendawo encane yomoya kanye nendawo yokosa inyama.
• E-Åkebosjön kunendawo yokuhlala netafula, izindawo zokubhukuda.
• EStora Hammarsjön kunendawo yokupaka, indlu yangasese engaphandle, i-windbreak, indawo yokosa inyama, amatende emvelo, indawo yokubhukuda, ubhavu oshisayo ne-sauna.
Hammarsjöleden kuphrojekthi yokuHiking
Hammarsjöleden kumephu yemvelo
UHagadalsgatan 577 91, 577 91 I-Hultfred, Sweden
Umzila omuhle okuthatha ukwedlula okuhlangenwe nakho kwemvelo ehlukile. Ilungele noma ngubani esimtholayo kepha sikwenze lokhu ngokungahambi kahle.
IHammarsjöleden umzila omuhle ngokumangalisayo. Kubhalwe uphawu kahle, kunamabhentshi asemgwaqweni nezimpawu zolwazi ezikhuluma ngezimpawu zomhlaba ohlangana nazo.
4/5 3 iminyaka edlule
Umzila omuhle wokuhamba
4/5 2 iminyaka edlule